Yeka ukufihla eyona nto ibalulekileyo kubukho bakho kwiWebhu | Martech Zone
Rhoqo kunokuba kungenjalo, xa ndindwendwela iwebhusayithi ebumbeneyo, into yokuqala endiyijongayo yibhlog yabo. Ngokukrakra. Andiyenzi kuba ndibhale incwadi kubloga kwequmrhuNdifuna ukuqonda inkampani yabo kunye nabantu abasemva kwayo.
Kodwa ndihlala ndingayifumani ibhlog. Okanye ibhlog ikwisizinda esahlukileyo xa sisonke. Okanye ikhonkco elinye kwiphepha labo lasekhaya, elichongwe ngokulula njenge blog.
Abantu bakho kunokwenzeka ukuba yenye yeenkampani zakho ezona zinotyalo mali kwaye loo talente yenye yezona zinto zibalulekileyo xa uthengisa. Kutheni uyifihla le talente? Ezinye iinkampani zinokukopa iimveliso zakho, amanqaku akho kunye nezibonelelo zakho… kodwa abanako ukukopa abantu bakho. Abantu bakho bangoyena mahluko mkhulu inkampani yakho inawo.
Nxiba iphepha lakho lasekhaya kunye nezithuba zakho zebhlog zakutshanje! Faka imifanekiso okanye amakhonkco kubabhali bebhlog yakho. Ayipheleli nje ekupapashweni kwebhlog yakho yokondla kwiphepha ngalinye lakho ekuphuculeni ukwenziwa kwala maphepha ngokubonelela ngomxholo omtsha, ofanelekileyo… ikwabonelela ngendlela yokuba iindwendwe zibazi abantu abasemva kwegama lakho.
Ayikhawulelwanga kwibhlog, nokuba. Ukuba ne-Twitter kunye ne-logo ye-Facebook kuyinto entle… kodwa ukupapasha umsinga wakho we-twitter kunye nokungena kwe-Facebook okanye iiFacebook Fans kunomdla ngakumbi. Abantu bathenga ebantwini-ke kutheni ufihla eyona nto ibalulekileyo kubukho bakho kwiwebhu?
Ezinye zeendlela zokufaka abantu kwindawo yakho:
Iphepha leqela -Kubandakanya iphepha leqela lihle. Ukuba ungabandakanya iiposti zebhlog zabo zamva nje kubhetele!
Yondla iwijethi -Bandakanya iiposti zamva nje zebhlog yakho kwindawo yakho. Zama ukubandakanya imifanekiso yombhali okanye umfanekiso obonisiweyo kwisithuba uqobo.
Iwijethi ye-Facebook -I-Facebook inenombolo Iiplagi zentlalo ezo ziyinto emnandi ngokuzisa uluntu lwakho lwe-Facebook kwindawo yakho kunye nokunye.
Iwijethi ze-Twitter -Zisa ingxoxo yakho ye-Twitter kwiwebhusayithi yakho!
Ukupapasha le ncoko kwindawo yakho kubonisa abaphulaphuli bakho ukuba ukulungele ngokupheleleyo ngena kwiincoko ezinentsingiselo kunye nethemba lakho okanye abathengi. Le yinto ayinakuba ngaphambili kwaye iziko kwiwebhusayithi yakho, kodwa oko kunokuba lula ukuyifumana kwaye uyilandele.
tags: blogfeed yebhlogibhlog yokupapashaiwijethi ye-facebookabantuabantu abathengisayoukuthengisaIwijethi ye-twitter
Amanyathelo ama-3 kwiMpendulo yoPhulo lweMicimbi yezeNtlalontle
Imithetho ye-Social Media